ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ သူအလိုချင်ဆုံးအရာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chaneyol – Trend.com.mm
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ သူအလိုချင်ဆုံးအရာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chaneyol
Posted on March 1, 2019 by Noel
နာမည်ကျော်တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်အဖွဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chaneyol ဟာဆိုရင်ဖြင့် ပရိသတ်တွေအသည်းကို အရည်ပျော်ကျစေခဲ့ပြန်ပါပြီ။
မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်း Chaneyol ဟာ W Korea magazine မှာ မတ်လအတွက်မျက်နှာဖုံးရှင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အင်တာဗျူးလည်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အင်တာဗျူးမှာ Chanyeol က သူတို့ EXO အဖွဲ့ဝင်တွေဆေုံရင် ပြောဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းတွေ၊သူအကြိုက်ဆုံးခရီးတွေအကြောင်း စသဖြင့် ပြောဖြစ်ခဲ့ပြီး
သူ့ရဲ့ EXO-L ပရိသတ်တွေ၊သူ့ရဲ့မိဘ၊သူ့အစ်မ၊သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ပြီးတော့ W Korea ကိုလည်းလက်ဆောင်တွေပေးချင်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ သူ့အနေနဲ့ရော ဘယ်လိုအရာကိုလိုချင်လဲမေးကြည့်တဲ့အခါမှာ Chanyeol က “ကျွန်တော် ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအလိုချင်ဆုံးအရာက အားလုံးရဲ့အချစ်တွေပါ။အဲ့ဒါကလွဲလို့ ကျန်တာဘာမှမလိုချင်ပါဘူး”ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲ အားလုံးရဲ့ အချစ်ကို အလိုချင်ဆုံးပါတဲ့နော်။ပရိသတ်ကြီး ပေးဖို့အသင့်ပဲလား?
နာမညျကြျောတောငျကိုရီးယား အဆိုတျောအဖှဲ့ EXO အဖှဲ့ဝငျ Chaneyol ဟာဆိုရငျဖွငျ့ ပရိသတျတှအေသညျးကို အရညျပြျောကစြခေဲ့ပွနျပါပွီ။
မကွာသေးခငျရကျပိုငျး Chaneyol ဟာ W Korea magazine မှာ မတျလအတှကျမကျြနှာဖုံးရှငျအဖွဈပါဝငျခဲ့ပွီး အငျတာဗြူးလညျးဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
အငျတာဗြူးမှာ Chanyeol က သူတို့ EXO အဖှဲ့ဝငျတှဆေေုံရငျ ပွောဖွဈကွတဲ့အကွောငျးတှေ၊သူအကွိုကျဆုံးခရီးတှအေကွောငျး စသဖွငျ့ ပွောဖွဈခဲ့ပွီး
သူ့ရဲ့EXO-L ပရိသတျတှေ၊သူ့ရဲ့မိဘ၊သူ့အဈမ၊သူ့အဖှဲ့ဝငျတှေ၊ပွီးတော့ W Korea ကိုလညျးလကျဆောငျတှပေေးခငျြတဲ့အကွောငျးပွောခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီမှာ သူ့အနနေဲ့ရော ဘယျလိုအရာကိုလိုခငျြလဲမေးကွညျ့တဲ့အခါမှာ Chanyeol က “ကြှနျတျော ဒီကမ်ဘာပျေါမှာအလိုခငျြဆုံးအရာက အားလုံးရဲ့အခဈြတှပေါ။အဲ့ဒါကလှဲလို့ ကနျြတာဘာမှမလိုခငျြပါဘူး”ဆိုပွီးပွောခဲ့ပါတယျ။ကဲ အားလုံးရဲ့အခဈြကို အလိုခငျြဆုံးပါတဲ့နျော။ပရိသတျကွီး ပေးဖို့အသငျ့ပဲလား?
မုန်လာဥနီက အလှအပနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအသုံးဝင်နေသလဲ?
အသည်းကွဲနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လို နှစ်သိမ့်ကြမလဲ